Qarax khasaare geystay oo Ciidamada DF lagula eegtay duleedka Muqdisho.
Saturday March 10, 2018 - 19:33:42 in Wararka by Super Admin
Qarax xooggan oo nooca miinada dhulka lagu aaso ah ayaa lagu beegsaday gaari ay la socdeen Ciidamada DF ee Imaaraatku tababareen xilli ay marayeen deegaanka KM13 ee duleedka magaalada Muqdisho, iyadoona khasaare uu ka dhashay.
Saraakiil ka tirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa xaqiijiyay in 6 ka mid ah Ciidamadii saarnaa gaariga ay ku nafwaayeen qaraxa halka tiro kalena ay ku dhaawacantay, waxaana goobtaasi ku burburay gaarigii ay la socdeen ciidamada.
Dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay iney arkayeen gaariga oo gabi ahaanba ku burburay qaraxa, waxaana sidoo kale qaraxa aad looga maqlay meelaha ku dhaw KM13.
Ciidamada DF-ka ee Imaaraatku tababareen ayaa ka mid ah kuwa ay dadweynuhu aad ugu neceb yihiin xadgudubyada, waxaana dadka ka sokow aysan isku wanaagsaneyn Maleeshiyaadka kale ee maamulka Farmaajo.